China Chicken Cage orinasa sy mpanamboatra |Shengsong
Ny tranon'akoho dia ilazana ireo tranom-biby vita amin'ny metaly na tariby ampiasaina amin'ny fiompiana akoho marobe ao anatin'ny faritra kely iray.Amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny trano sosona izy ireo satria manome fitantanana mora ho an'ny mpiompy akoho amam-borona izay te hanatsara ny fiompiana ary hanao mafimafy kokoa.
Ny tranon'akoho dia ilazana ireo tranom-biby vita amin'ny metaly na tariby ampiasaina amin'ny fiompiana akoho marobe ao anatin'ny faritra kely iray.Amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny trano sosona izy ireo satria manome fitantanana mora ho an'ny mpiompy akoho amam-borona izay te hanatsara ny fiompiana ary hanao mafimafy kokoa.Betsaka ny mpamboly no maniry ny tranom-borona sosona any Kenya noho ny tombontsoa maro azony toy ny fanamorana ny fitantanana ny akoho ary ny fanamorana ny fitantanana ny atody.
1. tranon'akoho 2. 3. Masinina famahanana 4.Fitaovana fanangonam-tody mandeha ho azy 5. milina fanalana zezika 6. milina fangaro fangaro fahana 7. Incubator 8. Tranon'ny papelika 9. tranom-bitro 10. mpamono akoho amam-borona 13. Mpanongotra 14. mpisotro 15. mpamono 16. mpankafy fiompiana
1. Famokarana avo - avo be ny famokarana atody satria ny akoho dia mitahiry ny heriny ho amin'ny famokarana.
2. Mihena ny areti-mifindra - Ny akoho dia tsy afaka miditra mivantana amin'ny dikiny ka tsy misy loza ara-pahasalamana lehibe.
3. Mihena ny fatiantoka avy amin'ny fahavakisan'ny atody - Ny akoho dia tsy mifandray amin'ny atodiny izay mivoaka fotsiny.
4. Tsy dia mazoto miasa - Rafitra fanondrahana mandeha ho azy ary tsotsotra, tsy dia mazoto miasa.
5. Mihena ny fandaniam-bola - Mihena ny fandaniam-poana amin'ny sakafom-biby, ary ny tahan'ny sakafo ara-dalàna isaky ny akoho.
6. Fihenam-bidy sy fandrobana - Ao amin'ny tranom-bateria, ny mpamboly dia afaka manisa mora foana ny akoho amin'ny fotoana rehetra.
7. Tahiry madio - Mora kokoa ny manala ny fako ao amin'ny rafitry ny tranom-bateria fa tsy toy ny fako lalina izay mandreraka kokoa.Amidy amin’ny vidiny mirary ihany koa ny zezika madio.
akoho manatody, akoho amam-borona, pullet, akoho kely
tranom-borona feno/akoho :
akoho tranom-bala harato, tranom-borona, fitoeran-drano, piple sy nipple fisotroana, feeder,
fitaovana raikitra sy fitaovana fametrahana.
10 taona antoka kalitao
tranom-borona / tokana
Electro galvanize (1. Surface malama, ary mamirapiratra,, zinc coating: 20-30g/m2,2. Ao amin'ny tontolo mando, dia mora harafesina, fa rehefa avy harafesina tsy misy fiantraikany amin'ny fampiasana, fanompoana fiainana: 8-10 taona )Satria ambany ny vidiny, aorian'ny harafesina dia tsy misy fiantraikany amin'ny fampiasana, ka ny ankamaroan'ny olona ampiasaina.
mafana tafo (1. ambonin'ny zinc dia matevina, mety hahatratra 500g/m2 eo ho eo, manana ny harafesiny fanoherana ny hery avo 2. ambonin'ny misy zinc fatotra, tsy malama, fanompoana ny fiainana: 25 taona--Na dia ho ela kokoa)
Pvc vovoka aorian'ny herinaratra tafo ( 1. Surface malamalama, ary mamirapiratra, Loko afaka misafidy: Mena, mavo, manga, maitso, mainty, fotsy.2. Satria roa sosona ny fitsaboana ambonin'ny, antirust fahaiza-manao enhancement, Tsy mora ny harafesina, fiainana fanompoana: 20 taona)
Ny vidiny ambony dia ahitana: Electric galvanized: A012: 1.88m * 2M * 1.55M ,96 vorona, 3 tiers.
Ny Serivisy >>>>>>>
1. Ny fitaovana sy ny dingana voafantina dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena.
2. Ekipa manam-pahaizana ara-teknika mamokatra vokatra tsara ihany
3. Ny vokatra voamarina na ny fisafoana fahatelo dia azo alaina araka ny fangatahana
4. Famakafakana na soso-kevitra ny programa fitaterana tsara indrindra, tehirizo ny vidiny
5. Tamberina ara-potoana na valio ny mailakao amin'ny serivisy mpanjifa tsara
6. Manome serivisy OEM
7. Fandefasana haingana avy amin'ny ekipa fivarotana tokana
8. Ny fanoloran-tenantsika: matihanina, fahombiazana, mahatoky
* Manana traikefa amin'ny fanondranana firenena mihoatra ny 100 izahay, manome toky fa hahazo fividianana milamina sy faly ianao
* fantaro tsara ny tsenanao, mifanaraka amin'ny tsenanao 100% ny vokatra kalitao
* Vidin'ny orinasa miaraka amin'ny vokatra RIGHT
1. Manana traikefa manankarena fikarohana & Fampandrosoana vondrona sy ny teknolojia tsara tarehy natao manokana vokatra mety ho an'ny mpanjifa.
2. Ny orinasantsika dia mandray amim-pahatsorana ny fiaraha-miasa amin'ny namana na ao an-trano sy any ivelany mba hahatonga ny hoavintsika mamiratra.
3. Ny vidiny dia ampitahaina tsara amin'ireo atolotry ny mpanamboatra hafa, na any Shina na any amin'ny toerana rehetra eles, raha mifandray aminay ianao dia ho hitanao fa ny vidiny dia mifaninana indrindra.
4. "Ny momba ny kalitao voalohany sy ny serivisy ambony indrindra" no torolalan'ny orinasa.
5. Tsy mitsahatra mikatsaka ny tonga lafatra, developing vokatra vaovao, manome serivisy tsara kokoa ary nametraka fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifa.
teo aloha: Cut Wire
Manaraka: Grassland Mesh